> Resource> Android> Olee otú iji Ekekọrịta Android ihuenyo
Play a kediegwu ngwa gị gam akporo ngwaọrụ, na-achọ ịkọrọ ya screenshot na ndị enyi gị na ezinụlọ? Ọ mara oke mma. Ma, otú ịkọrọ Android ihuenyo? Iji mee ka ọ, nke mbụ niile, i kwesịrị weghara Android ihuenyo. Ọ bụrụ na ị ka na-scratching gị isi banyere nke a, akwụsị ebe a. Isiokwu a bụ ihe na-egosi na ị na-esi mee ka ya na Wondershare MobileGo for Android ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Nke a Android njikwa na-enye gị ike weghara ma na-eso Android meziri mfe. M n'aka na mgbe na-agụ, ị ga-enwe ezi echiche banyere-ekere òkè Android ihuenyo.
Download MobileGo for Android inwe a-agbalị.
Nke a na-esonụ akụkụ na-agwa gị otú ị ịkọrọ ihuenyo on Android na Windows version - Wondershare MobileGo for Android. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na nza nke Android igwe na mbadamba. Biko ego ebe a iji nweta ihe Ama.
Easy iji mee ka Android ihuenyo nkekọrịta
Na-esonụ akụkụ, l'd-amasị-egosi gị otú ị weghara ma na-eso android ihuenyo. Ugbu a, wụnye a Android faili na kọmputa gị. Ẹkedori ya iji na-enweta njikọ window.
Nzọụkwụ 1. Jiri eriri USB ma ọ WiFi jikọọ gị android ngwaọrụ a PC
Ka malitere, i kwesịrị jikọọ gị Android ngwaọrụ PC. Here're ụzọ abụọ dị. Ị nwere ike ma na-eme ka njikọ site na eriri USB ma ọ bụ site WiFi. Nke a Android Manager ga ngwa ngwa ịchọpụta gị android ngwaọrụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ gị gam akporo ngwaọrụ-egosi na n'elu ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Android ihuenyo òkè
Dị ka ị na-ahụ, gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba-egosi na n'elu ke akpan window. N'okpuru ya bụ "nseta ihuenyo" button. Emeghe gị Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl na enweta na akara ngosi na-egosi na ihuenyo na ị chọrọ weghara. Pịa "nseta ihuenyo". Mgbe ahụ Android Manager ga ngwa ngwa weghara ugbu a ihuenyo na gị Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl. Site ndabara, nseta ihuenyo na-echekwa na .png usoro. Mgbe ahụ, na-agagharị kọmputa gị ga-a ọnọdụ ịzọpụta screenshot.
Ọ bụrụ na ị chọrọ weghara ọzọ Android ihuenyo, i kwesịrị ịgbanwe ihuenyo na gị Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl. Mgbe ahụ, pịa tuondu bọtịnụ. Mgbe ahụ, weghara ihuenyo ọzọ.
Ugbu a, ị nwere jisiri weghara Android ihuenyo. Ọ bụ oge na-eme na ihuenyo nkekọrịta banyere Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ọ bụrụ na i bu n'obi ịkọrọ gị Android ihuenyo Facebook, Twitter na ndị ọzọ, banye ndị a weebụsaịtị ma na-eso ha.
Ọ bụrụ na ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ dị ka gị Android ákwà na chọrọ ịzọpụta ha na ha Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl. Ha nwere ike iji nke a Android njikwa mbubata ha. Jikọọ enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ 'Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Mgbe ọ na-ahụrụ, ị nwere ike pịa "Photos" ke ekpe sidebar. Mgbe ahụ, pịa "Tinye" ka ịgbakwunye Android ihuenyo ka enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ 'Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl.
Na-ekiri ndị video. Ọ na-egosi gị otú ị na-eme Android ihuenyo nkekọrịta
Download MobileGo for Android ịkọrọ Android ihuenyo!
Olee otú iwepụ Kies na Windows na Mac
A Full Nduzi na Olee otú iji wụnye / Uninstall / Update HTC mmekọrịta (Manager)